Mandoa lamandy $ 2500 ny fanaovana ski ambony any Aotrisy
Home » Syndication » Mandoa lamandy $ 2500 ny fanaovana ski ambony any Aotrisy
Mpizahatany tsy ara-dalàna 100 any Aostraliana no tratra nanao ski
Fahafinaretana be dia be taloha ny mandeha ski ski any Austria. Ny dite mpihaza malaza dia tsy safidy intsony, ary rehefa tratran'ny mpizahatany miondrika ny fitsipiky ny COVID-19 dia lasa lafo kokoa ity fialantsasatra tsy ara-dalàna ity
Mpizahatany vahiny efa ho 100 no tratra namely ny tehezan-tsolika any Austria noho ny fanitsakitsahana ny fitsipiky ny virus coronavirus ao amin'ny firenena nandritra ny fanafihana ski nataon'ny polisy.
Ireo mpizahatany dia avy amin'ny firenena maro toa an'i Australia, ary koa Britain, Denmark, Sweden, Alemana ary Romania.
Ny fanaovana bemidina tany Tyrol ny zoma alina dia nanjary vahiny 96 no notsongaina, taorian'ny trano fandraisam-bahiny 44 tany St Anton am Alberg sy Stanzertal no nojerena.
Ny fandoavana onitra noho ny fanitsakitsahana ny fepetra viriosy dia mety hatramin'ny 2,180 euro.
Ny ben'ny tanànan'i St Anton, Helmut Mall, dia nampaneno lakolosy fanairana taorian'ny filazany fa misy, araka ny fahitany, be loatra ny vahiny ao amin'ilay faritra izay tsy navela ho tonga noho ny fitsipiky ny virus.
Toa nanararaotra ny bikan'ny lalàna tamin'ny alàlan'ny fisoratana anarana trano faharoa izy ireo ary nilaza fa mitady asa.
"Saingy tsy misy asa eo amin'ny fizahantany amin'izao fotoana izao," hoy i Mall, hoy ny gazety Kurier.
Ny programa fanamarinana fisakafoanana Vegan
Ny sakaizan'ny ankizy dia mampiofana ny tsy an'asa